नेकपाका विद्यार्थी नेता ऐन महरको आ’पत्तिजनक भाषा : बाबुरामलाई श्र’द्धाञ्जली ! आखिर किन? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
नेकपाका विद्यार्थी नेता ऐन महरको आ’पत्तिजनक भाषा : बाबुरामलाई श्र’द्धाञ्जली ! आखिर किन?
काठमाडौं । स’त्तारुढ दल नेकपा नि’कट विद्यार्थी संग’ठन अनेरास्ववियूका सं’योजक हुन् ऐन महर । नेकपामाथि आस्था राख्ने लाखौ विद्यार्थीका नेता उनले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता डा बाबुराम भट्टरा’ईविरुद्ध आ’पत्तिजनक भाषा प्रयोग गर्दै गाली गरेका छन् । लाखौ विद्यार्थीका नेताले प्रयोग गर्ने भाषाशैली र प्रस्तुतिले आम विद्यार्थीले कस्तो सं’स्कार सिक्लान् र मा’उ पार्टीले कस्तो वि’द्यार्थी नेता जन्मा’ए भन्नेमा प्र’श्न खडा भएको छ ।
प’टक पट’क सामाजिक सञ्जा’ल र अन्य औप’चारिक कार्यक्रममा स’मेत विपक्षीप्रति तल्लोस्तरको भाषाशैलीका साथ आलोचनामा उत्रिने उनले पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टरा’ईलाई श्रद्धाञ्जली दिएका छन् ।
उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भट्टराईको आलोचना गर्दै श्र’द्धाञ्जली दिएका हुन् । ‘धेरै पढे विद्धान हुन्छ, विद्धान बिग्रे बा’बुराम हुन्छ भन्थे पुष्टि हुँदैछ। यी गद्दा’र दलाल राष्ट्रघा’तीलाई हार्दिक श्र’द्धाञ्जली !’
उनले फेसबुकमा लेखेका छन् । बाबु’रामलाई यसरी आपत्तिज’नक टिप्पणी गरेपछि धेरैले महरको आलोचना गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । अत्य’धिक आलोचना भएपछि उनले आफ्नो फेसबुकमा अभिव्यक्ति सच्याएका त छन् तर उनको बौद्धिकता र चेतना स्तरमाथि भने टिप्पणी गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।भट्टराईले शनि’बार बिहान कोरोनाविरुद्धको लडाइमा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको आशयसहित टिप्पणी गरेका थि’ए ।
उनले नेक’पाभित्र ओली समूहमा वि’वेकहीन मान्छे भएको भन्दै लाखौ श्रमिकले दुःख पाए’र स्वदेश फर्किँदा कोरोनाको परीक्षण स’मेत हुन नसकेको बताएका थिए । ‘नेकपाको ओली गु’टभित्र विवे’क भएका मान्छे बाँकी छैनन् ?
विदेशमा काम गर्ने लाखौं श्रमिक स्वदेश फर्किरहेछन्, तिनको परीक्षण, व्य’वस्थापन हुन सकेको छैन। अरिङ्गाल सेनालाई प्रतिपक्षीको खेदो खन्नु सट्टा मौरी सेनामा बदलेर कोरोना वि’रूद्ध लडाईँमा लाउ’न सकिन्न ? मान्छे नरहे पहा’ड मात्रले राष्ट्र बन्ला?
Previous भारतकाे मि’चाहा प्र’वृत्ति नेपाली जनताले सहदैनन् : अभिनेता राजेश हमाल
Next धर्मको नाउँमा अ’फवाह फैलाउने पास्टर केशब आचार्य पुर्पक्षका लागी का’रागार चलान!